ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်ဘဝကိုမည်သို့သင်ကြားရမည်နည်း (Irish Examiner) - Your Brain On Porn
ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အန္တရာယ်များ (အိုင်းရစ်စစျဆေး) အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ပညာပေးလုပ်နည်း
20 သကဲ့သို့လုလင်တို့သည်လွယ်ကူစွာတစ်ဦးစွဲဖြစ်လာနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြု desensitised erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ရှိသည်, ကပြောပါတယ် Gwen Loughman
အင်တာနက်အမှောင်ထုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဖြစ်သည်။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာသည်” ဟု Nuala Deering, Ireland နှင့် Relationships Ireland မှဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ရောဂါကုသသူကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့အဖြစ်ဖြေရှင်းရန်ကြသည်မဟုတ်။
ဒါဟာစည်းကမ်းတနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်သူမဆိုအသက်အရွယ်အုပ်စုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း၏ဒီရေရပ်တလို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပညာပေးနှင့်မိသားစုများမကြုံစဖူးအပြောင်းအလဲ၏လောကဓာတ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သူတို့သားသမီးများကို ပြင်ဆင်. ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ "
ဆိုက်ဘာ - လိင်စွဲလမ်းမှုသည်စိတ်ကျန်းမာရေးတွင်နောက်ထပ်ဆူနာမီဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းနှင့်နှစ်ဆယ်ကျော်လူငယ်များသည် newsagents ၏ထိပ်တန်းစင်များပေါ်တွင်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့် mags များအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြောပြကြသည်။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားကမ္ဘာကြီးခလုတ်တစ်ခု၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူစက္ကန့်ကွာဖြစ်ပါတယ်။
ဤလူငယ်များသည်တစ်ချိန်ကအသက်ကြီးသူ၏ဆင်းရဲခြင်းနှင့်အတူ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူတင်ပြနေကြသည်။ ဤသူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာသောလူငယ်များဖြစ်ပြီးဆေးကုသမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများမရှိသော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံစွဲလမ်းလာသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအားနည်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရသောအခါသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူရင်းနှီးဒေါက်တာဇွန်လ Clyne, psychosexual နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကုထုံး (www.sextherapyireland.com), သူမရဲ့အလေ့အကျင့်အစီရင်ခံအခက်အခဲများရတဲ့နှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်း, တစ်ဦးစိုက်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာမြင်သည်။
erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပြဿနာများနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ဒါမှာမိမိတို့ 20s ထဲမှာ "လူတို့, 30s, 40s နှင့်။ အချို့, သူတို့အနေနဲ့စိုက်ထူရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲမရှိဘူး။ "
ဒေါက်တာ Clyne အများအပြားဆက်ဆံရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ၏အဆုံးသတ်ကပြောပါတယ်။ "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို ပို. ပို. လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်လာနေသည်, ဒါကြောင့်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, ဤလူမျိုးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကြည့်ရှုသူတို့၏ညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်ဖို့နှောင့်နှေးနေကြသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, '' လူတိုင်းကစောင့်ကြည့်မဖြစ် ''? "သူမသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရေတိုရေရှည်ပျော်မွေ့ကမ်းလှမ်းကြောင်းပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့် Viagra ၏အစောပိုင်းအသုံးပြုမှုလိုအပ်ရသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအဝင်ရေရှည်ပြဿနာများအတွက်ရလဒ်တွေကို။
Nuala မင် erectile ပြဿနာများကြုံနေရသူ 19 နှင့် 20 ၏ယောက်ျားမကြာခဏ porn သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုသူတို့ကို desensitised ထားပြီးသူတို့ထဲကအတော်များများ Viagra လိုခငျြသတိပြုမိနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ "သူတို့က, အစပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏မိသားစုဆရာဝန်ကနေဆေးညွှန်းအရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့မကြာခဏလုံခြုံအလေ့အကျင့်မဟုတ်သောအရာ, အွန်လိုင်းကရယူ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုထိုကဲ့သို့သောလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပြီး Viagra တစ်ဦးအမြန်-ပြင်ဆင်ချက်အဖြစ်ရှုမြင်နှင့်ကာလတိုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် Viagra အပေါ်ရေရှည်မှီခိုရေရှည်တည်တံ့မဟုတျပါဘူးကြောင့်မဆိုအခြေခံပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရှာအကြံပြုလိုတယ်။ "
ဒေါက်တာ Clyne သဘောတူ။ "ကျနော်တို့ကလူ porn ကြည့်ရှုနေကြသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုနှိပ်ကွပ်သောကြောင့်ပျင်း, အနိမ့်ယုံကြည်မှု, လွယ်ကူသောရရှိနိုင်မှု / အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိပါသလား? ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဒါဖန်သားပြင်ချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုများနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး '' အစစ်အမှန် '' လူတစ်ဦးချဉ်းကပ်ရန်, ဘယ်လို, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာမသိရပါဘူးအကြောင်း, ဒါကြောင့်အထီးကျန်ဖြစ်လာကြပြီလား? နှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြီးသားသူများ, တစ်ဆက်ပြတ်မှုနည်း ကောင်းမွန်သောသတင်းသုတေသနဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine အဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်း porn ကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ပြီးနောက်အဖြစ်အနည်းငယ်သာသုံးအဖြစ်လအတွင်းသာမန်အဆင့်ဆင့်သို့ပြန်လာနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါသူတို့ကဒီဒေသမှာတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူတစ်ဦးဦးကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံမှုရှာကြောင်းလျှင်မည်သူမဆိုညစ်ညမ်းဖြတ်အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်းကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ "
ဇွန်လ Clyne ဒါမစဉ်းစားထားဘူး။ "တကယ်ကဒီသူတို့လိုအပ်သည့်ပညာရေးမဟုတ်ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအွန်လိုင်းကတခြားလိင်ပညာပေးဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ ငါ '' ဆန့်ကျင် '' porn မဟုတ်ပေမယ့်ပိုပြီးကိုယ်ကပိုအဲဒါကိုအတွက်မဆိုတန်ဖိုးကတစ်ဦးကိုရွေးချယ်အရေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေပြင်ပရှိပါလျှင်မေးမြန်းငါ့ကိုအရွက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကြည့်ပါ။ "
Nuala မင် says: "လူငယ်များနှင့်အတူ, လိင်, အပျော်အပါး, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းန်းကျင်သူတို့ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံလိင်များအတွက်သင့်လျော်သောနှင့်လုံလောက်သောအများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်မရှိရင်လူငယ်များဆင်ကန်းတောတိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများနှင့်လိင်စွဲလမ်းသို့ထိ မိ. လဲနိုင်တယ်။ "
Deirdre Seery, အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာရဲ့ CEO, ပီတာလမ်း, ဖော့ဆို့, သူတို့ရဲ့ Drop-အတွက်ဆေးခန်းလူငယ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးကမ်းလှမ်းကပြောပါတယ်။ သူတို့ကမေးခွန်းတွေမေးနှင့်သူတို့အကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်ဖြေကြားရှိနိုင်ပါသည်။ သူမသည်ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ဖို့ပြောနေတာဒုံးပျံသိပ္ပံမဟုတ်ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကလိင်နှင့်များစွာသော 13- အကြောင်းကိုသဘာဝသိချင်စိတ်ရှိသည်နှင့် 14 နှစ်အရွယ်ပြည့်စုံအပြစ်ကင်းစင်အတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါ။ "
ဆယ်ကျော်သက်အငယ်ကလေးများထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှခက်ခဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာဤအရပ်မှသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု, ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ access ကို chaperone ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဟောင်းဆယ်ကျော်သက်စကားကိုနားထောငျနိုငျရနျ, သိမှတ်ညစ်ညမ်း၏မှောင်မိုက်အားနည်းချက်တွေအကြောင်းကိုသငျ့သညျ။ မည်သို့မိဘတစ်ဦးတစ်ဦးတန်ဖိုးရှိရှိလမ်းအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်စေဝေငှနိုင်သလဲ
ကက်သရင်း Hallissey, ပညာရေးနှင့်ကလေးစိတ်ပညာရှင်, ဆယ်ကျော်သက်ကယ့်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ချင်ပါလျှင်သူတို့တစ်တွေနည်းလမ်းရှာကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ သူမသည်ပင်အရပျ၌ကန့်သတ်နှင့်အတူမိဘများအိမ်အပြင်ဘက်ကိုမွငျစခွေငျးငှါအဘယျသို့ကျော်ယိမ်းကိုင်ထားလို့မရဘူး, တကကြီးမားသောတာဝန်နှင့်အကပြောပါတယ်။ သူမသည်ရောနှောမိဘများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားခဲ့သည်။
1 ။ လိင်နှင့်လိင်တစ်အချိန်ဆွေးနွေးချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပွင့်လင်းလျက်နေကြလော့တဦးတည်း session တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြာတွင်အသက်အရွယ်မှာ '' တစ်ဦးကိုမကြာခဏနည်းနည်းနှင့် '' အချိန်-frame ကိုထက်အချက်အလက်များ၏လွှမ်းမိုးနှင့်အတူအစောပိုင်းစကားပြောကိုစတင်ပါ။
2 ။ ဒါဟာကန့်သတ်ရှိသည်ဖို့ပညာရှိဖြစ်၏။ သို့သော်အဓိကအာရုံစိုက်သင့်ကလေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ဖြစ်သင့်, ဒါသူတို့အသက်ကြီးလာဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စိတျပိုငျးဆိုငျရာကြှမျးကငျြမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
3 ။ သတိရပါကြောင်းသိချင်စိတ်ကျေနပ်အောင်မှဒုက္ခဆိုသော်ငြားလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်ပုံမှန်ကျန်းမာသည်နှင့်ညစ်ညမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏသူတို့ဖြတ်ပြီးလာဘယ်သို့သောအားဖြင့်လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုသင်သူတို့သည်သင့်ထံသို့မလာနိုငျခံစားရချင်တယ်။
4 ။ သင့်စကားဝိုင်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မရသင့်တယ် '' porn မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် '' ။ သင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးထင်နှင့် porn နှင့် ပတ်သက်. ခံစားရသောအရာကိုစူးစမ်းပါ။ သူတို့ကို non-စျကွောစီရငျလမ်းအတွက်အန္တရာယ်များသိပါစေ။
5 ။ ဤအကိစ္စများအကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါ, တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်, ကြားနေအသံဖြင့်သုံးပါ။ အဘယ်သူမျှမပို့ချချက်မျှအပြစ်တင်, မရှက်။ ပါဝါရုန်းကန်မှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမထားပါနဲ့။ ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုလေ့ကျင့်! သိသိသာသာတုန်လှုပ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ကလေးကိုသင်သည်စကားပြောဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျးဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်။
No Nut နို ၀ င်ဘာလတွင်“ fap သို့မဟုတ် to fap to?” ဟူသောမေးခွန်းသည်တရားဝင်အန္တရာယ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ t.co/Oc0AN6DmJx #NoFap #NoNutNovember